Saameynta Teknolojiyada: Martech wuxuu sameynayaa waxa ka soo horjeedka saxda ah ee ujeedkiisa la doonayo | Martech Zone
Saameynta Teknolojiyada: Martech wuxuu sameynayaa wax iska soo horjeedka saxda ah ee ujeedkiisa
Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Shafkat Islam
Adduunyada tiknoolajiyada loogu talagalay inay noqoto xawaare iyo inay bixiso faa'iido istiraatiiji ah, tikniyoolajiyadda suuqgeynta ayaa sannadihii la soo dhaafay, dhab ahaantii, sameynta ka soo horjeedka saxda ah.
Waxay la kulantay daraasiin qalab, qalab, iyo softiweer ah oo laga kala xusho, muuqaalka suuqgeynta ayaa ka sii murugsan oo ka adag sidii hore, iyadoo xirmooyinka tiknoolajiyada ay sii adkaanayaan maalinta. Kaliya ha fiirin wax ka badan Gartner's Quadrants Magic ama warbixinnada 'Forrester's Wave'; qadarka tikniyoolajiyadda ay heli karaan suuqleyda maanta waa mid aan dhammaad lahayn. Kooxuhu inta badan waqtigooda waxay ku qaataan inay ka shaqeeyaan shaqada, lacagtuna waa inay u socotaa ololeyaal waxaa lagu bixiyaa hawlyo aan badnayn - oo badanaa gacanta lagu qabto.
In la soo dhaafay a waxbarasho, Sirkin Research ayaa indha indheeyay in ka badan 400 suuqleyda oo shaqooyin kala duwan leh iyo waayeelnimo si loo fahmo waxa hortaagan shuhadada. Sahanku wuxuu si fudud u weydiiyay:
Xaaladahaaga martida ee hadda jira ma yihiin kuwo awood u siinaya istiraatiijiyad?
Waxa la yaab leh, kaliya 24% suuqleyda ayaa yiri haa. Jawaab bixiyaasha sahanku waxay ku xuseen sababahan soo socda awgood:
68% ayaa sheegay in tiradoodu aysan awood u lahayn inay ka caawiso inay la jaan qaadaan ilaha (dadka iyo miisaaniyadda) istiraatiijiyadda
53% waxay yiraahdeen iskudhafkoodu wuxuu dhib ka dhigayaa abaabulka suuqgeynta (ololeyaasha, waxa ku jira, iyo hal abuurka) dhammaan kooxaha, tikniyoolajiyadda, iyo wadiiqooyinka waxqabadka wanaagsan.
48% waxay yiraahdeen xidhmooyinkooda ayaa si liidata isku dhafan
Oo waxay leedahay saameyn dhab ah, oo saameyn xun leh:
Kaliya 24% ayaa sheegaya in isugeyntooda ay gacan ka geysaneyso adkeynta iyo ka warbixinta waxtarka ololaha si wanaagsan
Kaliya 23% ayaa dhaha iskudarkoodu wuxuu awood u leeyahay inuu dhex wado wada shaqaynta qalabka
Kaliya 34% waxay dhahaan xariiradooda waxay ka caawineysaa iyaga inay abuuraan, xukumaan, keydiyaan oo ay wadaagaan hantida sifiican
Marka, maxay haddaba xalalka imika ee shuhadadu u dabooli la'yihiin baahiyaha kooxaha suuqgeynta?
Xaqiiqdu waxay tahay in aaladaha loo yaqaan 'Martech' muddo dheer ayaa loogu talagalay ugu horreyn sidii xalka dhibcaha - inta badan waxay barbar socdaan isbeddelkii ugu dambeeyay ee suuqgeynta ama "kanaalka usbuuca" - si loo xalliyo xanuunka keligood ah, loolanka, ama kiiska isticmaalka. Waqti ka dib, maaddaama qalabkani ay horumariyeen, way heleen feerka suuqleyda soo saarista RFPs, qiimeynta kuwa wax iibiya, iyo iibsashada xalalka hal nooc. Tusaalooyin:
Kooxdayadu waxay u baahan tahay inay abuurto oo ay daabacdo waxyaabaha ay ka kooban tahay - waxaan u baahan nahay madal suuq-geyn ah.
Hagaag, hadda markaan hawlgalnay geeddi-socodkeenna abuurista, aan maalgashanno shirkad maamule hantida hantida dhijitaalka ah si aan ugu keydinno waxyaabahayaga wadaagista iyo dib-u-isticmaalka.
Nasiib darrose, codsiyada nolosha dhabta ah, qalabyadani waxay ku dambeeyaan inay noqdaan kuwo aad loo maal-galiyo, la korsado, lana geeyo go'doomin buuxda. Qalab khaas ah ayaa loo iibiyaa kooxaha takhasuska leh. Xalku wuxuu ku fadhiyaa silo, oo laga jaray geeddi-socod ballaadhan oo ballaadhan. Qayb kasta oo ka mid ah softiweerku wuxuu leeyahay maamul u gaar ah, horyaallo, iyo isticmaalayaasha awoodda, oo leh qulqulatooyin shaqo oo kala duwan oo loogu talagalay gaar ahaan aaladdaas (iyo aaladdaas oo keliya). Oo mid waliba wuxuu dejiyaa xogtiisa gaarka ah.
Ugu dambeyntiina, waxa soo baxa ayaa ah mushkilad hawlgal iyo hawlkarnimo muhiim ah (oo aan lagu xusin koror culus oo ku yimid TCO ee barnaamijkaaga CFO / CMO). Marka la soo koobo: suuqleyda looma qalabeynin xal dhexe oo awood u siinaya kooxdooda inay si dhab ah u abaabulaan suuqgeynta.
Abaabulka suuq-geynta wuxuu u baahan yahay in la yareeyo maskaxda dugsiga hore. Way dhammaadeen maalmaha marka hoggaamiyeyaasha suuqgeynta iyo kooxaha waxqabadka suuqgeynta ay si wada jir ah xalka u wada saari karaan oo u ducayn karaan, si kastaba ha noqotee, dhammaan nidaamyadooda si macquul ah ayaa loo waafajin doonaa. Tagay waa maalimihii maalgelinta ee dhufto ee dhaxalka in sax sanduuqa kaliya in kooxdooda aysan si buuxda u qaadan oo ay qiime ka helaan aaladda.
Hase yeeshe, kooxuhu waxay u baahan yihiin inay aragti guud ka qaataan suuq-geynta - oo ay ka mid yihiin qorsheynta, fulinta, maamulka, qaybinta, iyo cabirka - oo ay qiimeeyaan xalalka caawiya dhamaadka ilaa dhamaadka abaabulka suuqgeynta. Qalabkee ayaa la isticmaalayaa? Sidee ayey isugula hadlaan? Miyay ka caawinayaan fududaynta iyo awood u lahaanshaha muuqaalka macluumaadka, dardargelinta geeddi-socodka, xakamaynta ilaha, iyo cabbirka xogta?
Hagaajinta dhibaatooyinkaan waxay u baahan doonaan isbeddel ku yimaada abaabulka suuqgeynta.
Daraasadda kor lagu xusay, 89% jawaab bixiyaashu waxay yiraahdeen in shahiidku uu noqon doono mid awood u siiya istiraatiijiyad sanadka 2025. Teknoolojiyada asaasiga ah ee ku taxan inay leeyihiin saameynta ugu weyn? Falanqaynta Saadaasha, AI / Mashiinka Barashada, Isu-habeynta Hal-abuurka Dynamic, iyo… Orchestration Suuqgeynta.
Laakiin Maxay Tahay Kooxda Suuqgeynta?
Si ka duwan maareynta mashruuca guud, maareynta shaqada, aaladaha maareynta kheyraadka, iyo xalalka kale ee dhibcaha, aaladaha abaabulka suuqgeynta ayaa ujeeddo loo dhisay caqabadaha gaarka ah - iyo geeddi-socodka - ururada suuq-geynta. Waa tan tusaale:
Abaabulka suuq geyntu waa qaab istiraatiiji ah oo isdaba-joog ah, oo aqoonsan qayb kasta oo geeddi-socodku u baahan yahay inuu shaqeeyo.
Si wax ku ool ah, softiweerka abaabulka barnaamijku wuxuu noqdaa guriga or nidaamka hawlgalka (yacni isha runta) ee kooxaha suuq geynta - halkaasoo shaqooyinka oo dhami ka dhacaan. Iyo sida muhiimka ah, waxay u adeegtaa sida nudaha isku xidhka ah ee u dhexeeya tikniyoolajiyadaha suuq-geynta ee kale, kooxaha suuq-geynta, iyo qulqulka shaqada - fududeynta abaabulka dhammaan dhinacyada qorshaynta ololaha, fulinta, iyo cabirka.
Sababtoo ah kooxaha suuqgeynta casriga ahi waxay u baahan yihiin tikniyoolajiyad suuq geyn casri ah. Software-ka keenaya waxa ugu fiican ee ka mid ah aaladahaan kala jaban oo isku wada jira hal madal (ama, ugu yaraan, istiraatiijiyad ahaan wuxuu la midoobayaa tiknoolajiyada ballaaran) si loo habeeyo geeddi-socodka iyo sidoo kale wareejinta macluumaadka iyo xogta aragti kordheysa, koontarool badan , iyo cabbiraad ka wanaagsan.
Ku soo dhawow Soo dhawow…
Soo Dhaweynta Suuq-geynta Suuqgeynta waa suugaan casri ah, iskudhaf ah, iyo ujeedoyin loo dhisay si looga caawiyo abaabulka suuqgeynta. Waxay bixisaa aragti si istiraatiijiyad leh loo qorsheeyo loona waafajiyo kheyraadka, aaladaha la iska kaashado oo shaqo looga baxo albaabka si dhakhso leh, maamul si loo ilaaliyo xakamaynta dhammaan ilaha suuq-geynta, iyo sidoo kale aragtiyo lagu cabbirayo shaqadaada.
Dabcan, dhammaantood waxaa hoosta ka xariiqaya API adag iyo suuq is-dhexgal xoog leh oo ka kooban boqollaal isku xirayaal aan lahayn - qaab feker leh oo loogu talagalay in lagu bixiyo isdhexgalka istiraatiijiyadeed ee weji kasta oo ka mid ah geeddi-socodka suuq-geynta.
Sababtoo ah sida kirishbooygu ugu baahan yahay budhadh si uu u abaabulo daraasiin fannaaniin ciyaara qalab kala duwan, maestro suuq geyntu waxay u baahan tahay muuqaal iyo xakameyn dhammaan qalabkooda si ay u abaabulaan suuqgeynta.
Waxbadan Ka Baro Soo Dhaweynta Codso Demo Soo Dhaweyn ah
Shafqat Islam waa aasaasaha iyo agaasimaha guud ee Welcome, sumadda NewsCred.
Hadaadan Garanaynin Mawduuca Caruurta WordPress is
GroupSolver: Leverage AI iyo NLP ee Cilmi-baarista Suuqa